निरज कोइराला | Nepal Flash
हरिबोधिनी एकादशीको व्रत कहिले बस्ने ?
काठमाडौं ।हिन्दूधर्ममा एकादशीको व्रतले ठुलो महत्त्व राखेको छ । एक वर्षमा पुरा २४ एकादशी पर्ने गर्छ । तर कुनै वर्ष मलमास परेको छ भने त्यो वर्ष २६ वटा एकादशी पर्छ । तिनैमध्ये एक हो हरिबोधिनी एकादशी । यसलाईदेवोत्थनी एकादशी पनि...
मानिस सृष्टिकै उत्कृष्ट प्राणी । मानिससँग क्षमतामात्र छैन, अनेकन् विशेषता पनि छन् । कोही दानी हुन्छन् त कोही कन्जुस । कसैले मित्रभाव राख्छन् त कोही वैरभाव । यस्तै यस्तै धेरै छन् विशेषता । त्यस्तै कोही धनी मानिस छन् त कोही...
कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि छठको महापर्व चलिरहेको छ । आज यसको तेस्रो अर्थात् मुख्य दिन हो । छठ पूजा कार्तिक महिनाको शुक्लपक्ष अन्तर्गत षष्ठी तिथिमा मनाइने गरिन्छ । यसै दिनलाई तराईतिर सूर्य षष्ठीको नामबाट पनि चिनिन्छ । यो पर्व दीपावलीको ६...
भाइपूजा र टीका कसरी लगाउने ? शास्त्रले के भन्छ ?
काठमाडौं । यमपञ्चकको विशेष र अन्तिम दिन सोमबार कार्तिक शुक्लद्वितीया हो । यस दिन दिदीबहिनीले दीप, कलश र गणेशको पूजा गरी दाजुभाइको दीर्घायु, सुख, समृद्धि र आरोग्यको कामना गर्दछन् । हामीले देख्ने गरेका छौँ स्थान अनुसार भाइपूजा भिन्नभिन्न तरिकाले गर्ने...
यस्तो छ गोवर्धन पूजाको विधि र महत्त्व
काठमाडौं । यमपञ्चकको चौथो दिन नेपालमा गोवर्धन पूजा गर्ने प्रचलन छ । यसै दिन गोरु पूजा पनि गरिन्छ । नेपालको केही ग्रामीण भेगमा अन्न लगायत कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने हलोको पनि पूजा गर्ने चलन रहेको छ । गोवर्धन पूजा द्वापरयुगमा...
यस्तो छ धन्वन्तरि जयन्तीको महिमा
कार्तिक त्रयोदशी अर्थात् यमपञ्चकको पहिलो दिन । नेपाली समाजमा यस दिन काग तिहारलाई पूजा गरी काग तिहार मनाउने चलन छ । हामीहरू कतिलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, यस दिन आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरिको जन्मदिन पनि पर्ने गर्छ । धन्वन्तरिलाई हिन्दु धर्म...
हाम्रो देशमा प्रचलित पर्वहरू मध्येको तिहार पनि एक हो । तिहारलाई दीपावली पनि भन्ने गरिन्छ । यस पर्वमा मानिसहरू घर लिप्ने, सरसफाइ गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्ने गर्छन् । यो पर्व पहाड, तराई रउपत्यकामा आआफ्नो तरिकाले मनाउने गर्दछन् । कार्तिक महिनाको...
आयुर्वेदमा बताइएको आठ चिकित्सा पद्धति
आयु भनेको के हो ? आयु कसरी प्राप्त गर्ने त्यस्को उपाय र आयु सम्बन्धी ज्ञान, आयु कसरी स्थिर गर्ने, सन्तुलित कसरी बनाउने आदि विषयलाई बताउने शास्त्र नै आयुर्वेद हो । स्वस्थ मानवहरूका स्वास्थ्यको संरक्षण र अस्वस्थ्य मानवहरूका रोगका निवारण गर्नको...